आजबाट अमेरिकामा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन सुरु, नेपालमा कहिले आइपुग्छ ? — onlinedabali.com
आजबाट अमेरिकामा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन सुरु, नेपालमा कहिले आइपुग्छ ?
काठमाडौं । आजबाट अमेरिकामा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिने भएको छ । आम सर्वसाधारणले खोप लगाउन सक्ने गरी अमेरिकी सरकारले अनुमति दिएको छ । तर पहिलो चरणमा जोखिम क्षेत्रका व्यक्ति, स्वास्थ्यकर्मी, अग्रपंक्तिमा रहेर जोखिमयुक्त काम गर्नेहरु र ज्येष्ठ नागरिकले खोप पाउने अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
बीबीसीका अनुसार अमेरिकाका विभिन्न राज्यका १ सय ४५ ठाउँमा आज खोप लगाइनेछ । भोली अरु ४ सय २५ ठाउँमा खोप दिइनेछ । पहिलो चरणमा तीस लाख लाख मानिसहरुलाई खोप लगाइनेछ ।
यसअघि रुसले पनि कोरोना खोप सुरु गरिसकेको छ । त्यस्तै बेलायतलगायतका युरोपका देशहरुले पनि कोरोना खोप लगाउन सुरु गर्न अनुमति दिइसकेका छन् । तर नेपालसहित तेस्रो विश्वका देशहरुमा कोरोना खोप आइपुग्न अझै एक वर्ष लाग्ने बताइएको छ । खोप उत्पादन गर्ने देशहरुले पहिलो आफ्नो देशका नागरिकलाई लगाउने भएकोले नेपाल जस्ता साना देशहरुले तत्काल कोरोना खोप पाउने सम्भावना कमै भएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।